ZayYarHlaing: Portable Application
မိမိသွားလေရာကို USB drive နှင့်အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်သော application များစွာကိုအခမဲ့ ရယူနိုင်သော site တစ်ခုပါ။ ထို site တွင် Portable ဆော့ဖ်ဝဲများစွာကိုတွေ့ ရှိနိုင်ပြီး၊ computer ပြုပြင်ခြင်းဆိုင်ရာ Tool များ၊ အင်တာနက် Tool များ၊ media player များ၊ game များ၊ CD နှင့် DVD Burning software များစသည်ဖြင့်ခေါင်းစဉ်ပေါင်းမြောက်များစွာဖြင့် ခွဲခြားဖေါ်ပြပေးထားပါသည်။ ထို့ ပြင် software များကိုအသုံးပြုပုံအဆင့်ဆင့်နှင့်အရွယ်အစားတို့ ကို အသေးစိတ်ဖေါ်ပြပေးထားပါတယ်။ site အတွင်း software ပေါင်းများစွာကိုအလွယ်တစ်ကူရှာဖွေနိုင်ရန် Search bar ထည့်သွင်းပေးထားပြီး Portable Application များစွာကိုရယူလိုသူများအတွက် သင့်တော်သော site တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
0 comments: to “ Portable Application ”
Portable EXIF Viewer | Portable USB Pen Drive Appl...
Fast Image Resizer – Resize Pictures | Portable US...
True Love ( Poem from my Yume )
Light On The Flower
2010. FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA.
knockin on heavens door guns'n roses
Tutorial for all.
God Mode for Window 7.